Ọkụ mmiri igwe anaghị agba nchara ọ bụ ụwa niile? Kedu ka esi echekwa? - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Ọkụ mmiri igwe anaghị agba nchara ọ bụ ụwa niile? Kedu ka esi echekwa?
N'ụzọ bụ isi, ezinụlọ ọ bụla nwere ụlọ ịsa ahụ, nke mmiri ozuzo igwe anaghị agba ncharammiri ịsa ahụbụ nnọọ nkịtị ịsa ngwa. Enwere ọtụtụ ụdị ọkpọkọ mmiri ozuzo na ahịa, ma enwere ọtụtụ ụdị. Ya mere, mgbe ịzụrụ, ị maara na ha bụ eluigwe na ala ?Olee otú ịnọgide na-enwe ya na nkịtị ojiji?
1. Igwe igwe anaghị agba nchara mmiri ozuzo ọ bụ zuru ụwa ọnụ?
N'ezie, ọkpọkọ mmiri ụlọ na ngwaahịa ndị ọzọ ka edepụtawo ụkpụrụ ụlọ ọrụ edoziri ọtụtụ afọ gara aga. Ya mere, ọtụtụ n'ime igwe anaghị agba nchara ịsa ọkpọkọ bụ nke edo size, n'ihi ya, ọ dịghị mkpa n'ezie na-eche banyere ekwekọghị nha mgbe ịzụrụ.
N'ezie, ụfọdụ ụdị ụlọ ịsa ahụ nwere ụkpụrụ nha nke ha, yabụ ị nwere ike ịzụta otu usoro ahụmmiri ịsa ahụ.
A na-atụ aro ka ị ṅaa ntị na dayameta nke tube ịsa ahụ na-adịghị agwụ agwụ mgbe ịzụrụ ya. Ogo nke dayameta kwesịrị inwe ike dakọtara njikọ ntinye na ịsa ahụ. Mgbe ịzụrụ, ị nwere ike iji hose ochie maka ntụnyere, ka ị ghara ịzụta ya na-ezighị ezi.
2, ka esi echekwa mmiri ozuzo igwe anaghị agba ncharaeriri mmiri ịsa ahụ?
N'ihi na a na-eji eriri ịsa ahụ eme ihe kwa ụbọchị, ọ bụ ihe a na-eri eri, ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe nke ọma ma na-edozi ya nke ọma, enwere ike iji ya ogologo oge.
N'iji ya eme ihe, ebe ndị a na-ehulata na-adị mfe imebi na ịgbapụ. Ya mere, zere ịgbagọ nke ukwuu, agbagọla mgbe ejiri ya, ma gbalịa ịgbatị ya.
Tụkwasị na nke ahụ, okpomọkụ nke mmiri ekwesịghị ịdị elu. N'ozuzu, a naghị atụ aro ka ọ gafere ogo 70. N'otu oge ahụ, zere ikpughe ya na anyanwụ. Okpomọkụ dị elu na ụzarị ultraviolet nwere ike ime ka ịka nká ngwa ngwa ma belata ndụ ọrụ.
Nke gara aga:Ndụmọdụ maka nlekọta ịsa ahụ
Osote:Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na isi ịsa ahụ na-agbapụta